प्रदेश १ को तेस्रो वार्षिकोत्सवमा प्रचण्ड माधव समूहले बहिस्कार गरे, के भयो त त्यस्तो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperप्रदेश १ को तेस्रो वार्षिकोत्सवमा प्रचण्ड माधव समूहले बहिस्कार गरे, के भयो त त्यस्तो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
प्रदेश १ को तेस्रो वार्षिकोत्सवमा प्रचण्ड माधव समूहले अघोषितरुपमा बहिस्कार गरेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । वार्षिकोत्सवमा प्रचण्ड(माधव) समूह सहभागी भएन । प्रचण्ड माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले वैधता सकिएको सरकारको कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताए ।वार्षिकोत्सवमा नेपाली कांग्रेसले पनि सहभागिता जनाएको छैन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पार्टीको कार्यक्रम भएकाले सहभागी नभएको बताए ।
संसद् छल्दै हिँडेका कारण पार्टीकोतर्फबाट सहभागिता नभएको उनको भनाइ छ । ‘खबर आएको थियो तर जान आवश्यक ठानेनौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको कार्यक्रम पनि छ । सरकार संसद छल्नतर्फ लागेको छ ।’तर कांग्रेसबाट सांसद विन्दिया कार्की सहभागी भएकी छन् ।
ओलीको गृहनगर झापा दमक नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखमा राप्रपा र कांग्रेस उम्मेदवार विजयी